Madaxweyne Erdogan oo Weerar afka ah ku qaaday Hogaamiyaasha talada Jarmalka haya – dulmidiid
Madaxweyne Erdogan oo Weerar afka ah ku qaaday Hogaamiyaasha talada Jarmalka haya
Madaxwenaha dalka Turkiga Rajab Tayib Erdogan, ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaasha talada dalka Jarmalka haya, waxa uuna ku tilmaamay in ay yihiin dad cadow ku ah dalka iyo dadka Turkiga.
Waxa uu ugu baaqay Madaxweynaha dalka Turkiga dadka asal ahaan kasoo jeeda Turkiga ee kunool dalka Jarmalka in aysan codkooda siin doorashada soo socota hogaamiyaasha dalka Jarmalka gaar ahaan xisbiga taalada dalkaasi haya.
Rajab Tayib Erdogan, ayaa ku eedeeyay xisbiyada ka jira dalka Jarmaka gaar ahaan xisbiyada Christian Democrats [CDU], Social Democrats [SPD], iyo Green Party in ay yihiin kuwa cadow ku ah dalka Turkiga.
Dalka Jarmalka ayaa lagu wadaa in doorashada guud ka dhacdo 24-ka September ee sanadkan, waxaana doorashadaasi codkooda ka dhiiban doona dad ku dhaw hal Milaan qof oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga balse heesta dhalashada Jarmalka.
Xiriirka u dhaxeeya dalalka Jarmalka iyo Turkiga ayaa aad u xumaaday tan iyo waxii ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga, waxaana Madaxweyne Erdogan ku eedeeyay in Jarmalka soo dhaweeyeen askar qeyb ka aheed afgambigii fashilmay.